Italy Archive - Gool FM - page 5	twitter
“Waxaan u imid Juventus si aan ugu guulaysto koob walba” – Dani Alves
(Torino) 12 Maarso 2017 Daafaca reer Brazil ee kooxda Juventus Dani Alves ayaa ka hadlay sababtii uu ugu soo biiray kooxda reer talyaani ka hor kulanka FC Porto.
Dani Alves ayaa sheegay in Juventus ay hanatay 5-jeer oo xiriir ah horyaalka talyaaniga, wuxuuna intaa ku daray inay tahay koox u samaysan qaadista koobabka.
Wuxuu siiraaciyay inuu ugu soo biiray kooxda Juventus si uu ugu guulaysto koob walba isaga oo sii daba dhigay inuu rajaynayo inay xiliciyaareed kan ku dhamaystaan qaab fiican.
“Waan filaayay in Juventus 
Andrea Belotti waxaa qaadanaysa kooxdii 100 milyan bixisa!!
(Torino) 12 Maarso 2017 – Sinisa Mihajlovic ayaa qirtay in Torino aysan wax awood ah u lahayn inay celiso haddii Andrea Belotti laga bixiyo lacag dhan €100m oo euro.
Qannaaska Granata ayaa waxaa xiisaynaya kooxo fara badan oo reer Yurub, waxaase qandaraaskiisa lagu fasiqi karaa 100 milyan oo euro, taasoo aan weliba khusaynin kooxaha Talyaaniga.
Macallinkiisa oo hadlayay kahor kulanka Serie A ay Insiinta ku wajahayaan Lazio, ayaa sheegay inuu wax kasta samayn lahaa si uu 23-jirkan oo 22 gool ku hoggaaminaya 
Juventus oo laba laacib ka doonaysa Real Madrid
(Torino) 12 Maarso 2017 Kooxda Juventus ee dalka talyaaniga ayaa laba laacib oo muhiim ah ka doonaysa kooxda Real Madrid sida ay baahisay shabakada Okdiario.
Juventus ayaa diirada saaratay ciyaartoyda kala ah Isco iyo Mateo Kovacic kuwaas oo aan boos joogto ah ka haysan kooxda xiliciyaareed kan.
Real Madrid ayaa dhankeeda doonaysa Dybala balse Juventus ayaa doonaysa inay gacanta ku dhigto Isco iyo Mateo Kovacic hadiiba Real ay ka iibinayaan weerar yahanka reer Argentina.
Shabakada ayaa intaa ku dartay in juventus ay sidoo kale doonayso daafaca reer 
WAA RIGOORE! Taageerayaasha oo baraha bulshada ku qaadaa dhigay kulankii xalay muranka dhaliyay ee Juve-Milan + Sawirro
(Roma) 11 Maarso 2017 – Xalay ayaa waxaa dhacay kulan uu muran badani ka dhashay oo dhexmaray kooxaha Juventus vs AC Milan kaasoo ay Juve 2-1 ku badisay kaddib markii rigoore muran dhaliyay loo dhigay intii lagu jirey daqiiqad dheeraad ah oo lagu daray ciyaarta.
Sababta muranka dhalisay ayaa ah in rigoorada la dhigay ay ku saabsanayd kubad uu gacanta ku taabtay De Sciglio lkn markii muuqaallada ku celiska ah la daawaday waxaa soo baxday in uusan laacibku kubadda ula qasdin 
RASMI: AC Milan oo xaqiijisay inuu dhaawacmay Suso (Imisa ayuu maqnaan karaa?)
(Milano) 11 Maarso 2017 – AC Milan ayaa si rasmi ah u shaacisay in Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, oo loo yaqaanno Suso uu wax ka noqday qaybta bidix ee muruqa cajirka, taasoo ka dhigan inuu garoomada ka maqnaan doono muddo 2 todobaad ah ugu yaraan.
“AC Milan waxay ku dhawaaqaysaa in Sabtidan 11-ka Maarso, uu Suso maray tijaabo caafimaad oo lagu ogaadey inuu ka dhaawacan yahay muruqa bidix ee cajirkaa. Waxa harayna waa in la go’aamiyo waqtiga uu 
Juventus oo heshiis lagaartay tababarihii badali lahaa Allegri
(Torino) 11 Maarso 2017 Kooxda Juventus ayaa heshiis lagaartay tababarihii badali lahaa Max Allegri oo u muuqda mid haatan ka sii socda kooxda.
Allegri ayaa go’aansaday inuu katago Juventus dhamaadka xiliciyaareed kan, wuxuuna diirada u saaranyahay kooxaha Arsenal, PSG iyo Barcelona sida laga soo xigtay Corriera della Sera.
Juventus ayaa heshiis dhamaystiran la gaartay tababaraha kooxda Roma ee Luciano Spalletti kaas oo qandaraaskiisa Roma uu dhacayo dhamaadka xiliciyaareed kan.
Luciano Spalletti ayaa laba maalin ka hor shaaciyay inuu katagi doono Roma hadii uu ku guul 
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in PSG ay bartilmaameedsan doonto 
(Milano) 10 Maarso 2017 – AC Milan ayaa ogolaatay inay magdhow dhan €5m oo euro oo ciqaab ah ku wareejiso dowladda hoose ee Milano, taasoo ah lacag ka yar €40m oo markii hore laga dalbanayay.
Sharikadda Rossoneri maamusha ee Fininvest, ayaa ku guulaysatey xuquuq ay ku dhisi kartey garoon ay ka rabtey agagaarka Pontello ee magaalada Milano, balse markii dambe way kansaleen mashruucii oo dhanba.
Hay’addii dhulkaa iska lahayd oo ah Fondazione Fiera Milano ayaa kaddib ka dalbatay €40m oo magdhow ah 
Han Kwang Song: Laacibkii ugu horreeyay ee North Korean ah oo abid ka ciyaara Serie A!
(Cagliari) 10 Maarso 2017 – Cagliari ayaa lasoo saxiixatay weeraryahanka Han Kwang Song, oo noqday laacibkii ugu horreeyay ee North Korean ee abid u safta koox Talyaani ah.
Han ayaa toos u aadaya da’yarta Cagliari ee Primavera-ha kaddib markii uu ku guulaystey tijaabooyinkii laga qaaday, isagoo sidoo kale u safan kara kooxda waawaynka Cagliari ee ka dheesha Serie A haddii uu fursad siiyo Massimo Rastelli.
War kasoo baxay naadiga Sardinian-ka ah aya webkeeda ku sheegtay in 18-jirkani uu yahay weerar yahan halis 
JUVE-MILAN: Suso oo seegaya kulanka caawa & isku shaandhayn ay samaynayaan labada kooxood (Shaxda laga yaabo)
(Torino) 10 Maarso 2017 – Suso oo awal la hadal hayay inuu safan doono kulanka caawa dhexsanaya Juve-Milan ayaa la xaqiijiyay inuu kulankaasi seegayo, halka Juve ay lafteedu isbedello samaynayo.
Jookarkan kooxda Rossoneri ee Suso ayaa la arkayay gaariso wayn oo cajirka uga xiran, sidaa darteed uma badna in kulankan halis lagu geliyo, iyadoo uu bedeli doono Lucas Ocampos oo weerarka ku seddexeeyn doona Carlos Bacca iyo Gerard Deulofeu, waxaana Milan dhaawac kaga maqan Ignazio Abate, Keisuke Honda, Giacomo Bonaventura iyo 